Ny governemanta USA dia nanova ny lalao EV fotsiny.
avy amin'ny admin tamin'ny 21-08-20
Efa eo an-dàlana ny revolisiona EV, saingy mety ho efa nisy ny fotoanany. Ny fitondran'ny Biden dia nanambara ny tanjon'ny fiara elektrika ho 50% amin'ny varotra fiara rehetra any Etazonia amin'ny 2030 maraina amin'ny alakamisy. Anisan'izany ny bateria, fiara mifangaro hybrid plug-in ary sela misy solika ...
Inona no atao hoe OCPP & Nahoana no zava-dehibe ny fananganana fiara elektrika?
amin'ny alàlan'ny admin amin'ny 21-08-14
Teknolojia mipoitra ireo tobin'ny mpamily fiara elektrika. Araka izany, ireo mpampiantrano tranokalan'ny mpikirakira sy mpamily EV dia mianatra haingana ireo teny sy fotokevitra isan-karazany. Ohatra, ny J1772 raha vao jerena dia mety ho toy ny filaharana litera sy isa maromaro. Tsia. Rehefa nandeha ny fotoana, J1772 wil ...
Inona no zavatra tokony ho fantatrao rehefa mividy charger EV ao an-trano
avy amin'ny admin tamin'ny 21-08-06
Home EV Charger dia fampitaovana ilaina hamatsiana ny fiara elektrikao. Ireto ny zavatra 5 ambony tokony hodinihina rehefa mividy Home EV Charger. Zava-dehibe ny toeran'ny mpamandrika NO.1 Rehefa mametraka ny Home EV Charger eny ivelany ianao, izay tsy dia voaro amin'ny singa, dia mila mandoa vola ianao ...
Etazonia: $ 7.5B amin'ny volavolan-dalàna momba ny fotodrafitrasa ny EV Charging
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-07-31
Taorian'ny fikorontanana amam-bolana dia tonga tamin'ny fifanarahana fotodrafitrasa bipartisan ihany ny farany. Ny volavolan-dalàna dia antenaina ho mihoatra ny $ 1 trillion mandritra ny valo taona, tafiditra ao anatin'ny fifanarahana nifanaovana dia $ 7,5 miliara ho an'ny fotodrafitrasa famatsiana fiara elektrika mahafinaritra. Ny marimarina kokoa, ny $ 7,5 miliara dia handeha ...
Joint Tech dia nahazo ny mari-pahaizana ETL voalohany ho an'ny tsenan'i Amerika Avaratra
Zava-dehibe tokoa ity Joint Tech ity no nahazo ny mari-pankasitrahana ETL voalohany ho an'ny tsenan'i Amerika Avaratra ao amin'ny tanin'ny China China EV Charger.
GRidalERVE dia manambara drafitra ho an'ny làlambe elektrika
GRidalERVE dia nanambara ny tetikadiny hanovana fotodrafitrasa famoahana herinaratra (EV) any UK, ary namoaka tamin'ny fomba ofisialy ny làlam-pifandraisana GRIDERVE Electric. Izany dia mitaky tambajotra manerana an'i Angletera misy 'Power Hubs' mahery 50 mahery miaraka amina charger 6-12 x 350kW tsirairay, miampy efa ho 300 rapi ...
Volkswagen dia manatitra fiara mandeha amin'ny herinaratra hanampiana ny nosy grika handeha maintso
ATHENS, 2 Jona (Reuters) - Volkswagen dia nanatitra fiara elektrika valo tany Astypalea ny alarobia ho amin'ny dingana voalohany hanodinana ny fitateran'ny nosy grika ho maodely, maodely antenain'ny governemanta hitarina amin'ny firenena sisa. Ny praiminisitra Kyriakos Mitsotakis, izay nanao ny maitso e ...
Ny fanatontosana fotodrafitrasa any Colorado dia mila mahatratra ny tanjon'ny fiara elektrika
Ity fandinihana ity dia manadihady ny isa, ny karazany ary ny fizarana charger EV ilaina amin'ny fanatratrarana ny tanjon'ny varotra fiara elektronika 2030 any Colorado. Izy io dia mamaritra ny filan'ny besinimaro, ny toeram-piasana ary ny charger an-trano ho an'ny fiaran'ny mpandeha amin'ny faritry ny distrika ary manombatombana ny vidiny mifanaraka amin'ireo filan'ny fotodrafitrasa ireo. To ...
Ahoana ny fomba hamenoana ny fiaran'ny herinaratrao
Ny hany ilainao handoavana ny fiara elektrika dia ny socket ao an-trano na any am-piasana. Ankoatr'izay dia miha-mandroso hatrany ny charger haingana ho an'ireo mila filàna famenoana haingana ny herinaratra. Misy safidy maromaro amin'ny famoahana fiara elektrika ivelan'ny trano na rehefa mandeha. Samy tsotra AC char ...
Inona no atao hoe Mode 1, 2, 3 ary 4?
Ao amin'ny fenitra fihenam-bidy, ny famerana dia mizara amin'ny fomba antsoina hoe "mode", ary izany dia mamaritra, ankoatry ny zavatra hafa, ny ambaratongan'ny fepetra fiarovana mandritra ny famandrihana. Fomba famandrihana - MODE - raha fintinina dia milaza zavatra momba ny fiarovana mandritra ny famandrihana. Ireo amin'ny teny anglisy dia antsoina hoe charge ...
ABB hanangana garazy 120 DC any Thailand
Nahazo fifanarahana iray avy amin'ny Fahefana Elektronaly Faritany (PEA) any Thailandy ny ABB mba hametrahana fiantsonan'ny fiara maherin'ny 120 ho an'ny fiara elektrika manerana ny firenena amin'ny faran'ity taona ity. Ho tsanganana 50 kW ireo. Raha ny tena manokana, singa 124 an'ny tobin'ny mpamono haingam-pandeha terra 54 an'ny ABB no ho ...
Ny teboka fiampangana ny LDV dia mihanaka hatrany amin'ny 200 tapitrisa ary manome 550 TWh ao amin'ny Scenario fampandrosoana maharitra
Ny EV dia mitaky fahazoana miditra amin'ny teboka famahanana, fa ny karazany sy ny toeran'ny charger dia tsy ny safidin'ny tompona EV irery. Ny fanovana ara-teknolojia, ny politikam-panjakana, ny fandrindrana ny tanàna ary ny fampitaovana herinaratra dia samy manana ny anjara toerany amin'ny fotodrafitrasa miampanga EV. Ny toerana, fizarana ary karazana vehi herinaratra ...